कोभिड उपचारमा अब्बल सशस्त्र, महामारीमा सेना खै ? - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ बिचार ∕ कोभिड उपचारमा अब्बल सशस्त्र, महामारीमा सेना खै ?
कोभिड उपचारमा अब्बल सशस्त्र, महामारीमा सेना खै ?
सूर्य सुवेदी २०७७, कात्तिक ११ गते १३:३८ मा प्रकाशित
कोभिड–१९ को कारण हाम्रो मुलुक आक्रान्त भएको करिब दश महिना भयो । यो दश महिनाको पूर्ण समिक्षा तत्काल गर्नु पक्कै पनि मुर्खता हुनेछ। कोभिडका कारण सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भएको छ भने यो रोगको बुझाइमा पनि दुबिधा देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका बिद्वानहरुले राज्यले यो महामारीलाई कम आकलन गरेर आमनागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेको तर्क गरिरहेका छन्। राज्य भने उनीहरुको सुझावलाई मजाक लिइरहेको देखिन्छ । यो आमनेपाली नागरिकको लागि पक्कै पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सशस्त्र अस्पतालमा हालसम्म २० जना भन्दा बढि कोरोना संक्रमितहरु प्लाज्मा थेरापीबाट निको भएका छन्। सशस्त्र अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको निको सङ्ख्या पनि धेरै छ। राम्रो उपचार भई निको हुनेको सङ्ख्या धेरै भएकाले संक्रमणमा परेका नागरिकको पहिलो रोजाईको अस्पताल नै सशस्त्रको अस्पताल रहेको छ।
यो आलेखमा कोभिड उपचारमा बिभागीय अस्पतालले खेलेको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । कुनै पनि महामारीको बेलामा आमनागरिकको सबैभन्दा ठूलो भरोसाको केन्द्र नेपाली सेना हुन्छ। सुरक्षा निकायका तीन अङ्ग मध्य नेपाली सेना तालिम लगायत हरेक साधन श्रोतका हिसाबले निक्कै बलियो छ। राज्यबाट सबैभन्दा धेरै बजेट पनि सेनालाई छुट्टिन्छ। भुकम्प लगायतका महाबिपत्तिहरुमा सेनाको भूमिका उच्च प्रसंशायोग्य थियो । तर कोभिड महामारीको बेलामा नेपाली सेना नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्वमा चुक्यो।
सुरुवाती दिनहरूमा सेनाले यस्तो गर्दै छ, उस्तो गर्दैछ भनेर धेरै मिडियाबाजि भयो तर कालन्तरमा कोभिड नियन्त्रणमा सेनाको कुनै पनि भूमिका रहेन। छाउनीको आर्मी अस्पताल बाहेक धेरै ठाउँमा सेनाका साना उपचार केन्द्र पनि छन्।छाउनीमा मात्रै नेपाली सेनाको ६ सय चालिस बेडको अस्पताल छ। सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा करिब एक हजार १ सय जना दक्ष मेडिकल जनशक्ति छन्। तर महामारीको बेलामा नेपाली नागरिकलाई त्यो केही काम लागेन। अहिले उक्त अस्पतालमा सेनाले आफ्ना कर्मचारी र उनका आफ्न्तको मात्रै उपचार गराई रहेको छ।
यो बिषयमा थप जानकारी लिन उक्त अस्पतालका डाक्टर सुनिता पन्त सँग कुरा गर्दा अहिले सेनाको अस्पतालले आर्मी कर्मचारी र उनका आफन्तको मात्रै उपचार पाइरहेको कुरा सत्य हो भन्दै अरु कुराको जवाफ आफूले दिन नमिल्ने र जवाफको लागि आर्मी प्रबक्तालाई सोध्न सुझाव दिइन्।
त्यसैगरी नेपाल पुलिसको महाराजगन्जमा एक सय ४० बेडको अस्पताल छ। त्याहाँ करिब ६ सय मेडिकल जनशक्ति छन्। तर जति बेड र जनशक्ति भए पनि आर्मी अस्पताल र पुलिस अस्पताल आमनागरिकका लागि लासाको सुन जस्तै भए । खासगरी सबै अस्पतालहरुले आफ्ना कर्मचारीहरु र उनका आफन्तको मात्रै चेकजाँच र उपचार गर्ने हो भने आमनागरिकले उपचार गर्न कहाँ जाने ? अन्य अस्पतालहरुमा काम गर्ने डक्टरहरुले आफ्ना बा आमाको लागि पनि बेड नपाएको दृष्टान्तहरु धेरै द्धन् । पुलिस प्रबक्ता कुबेर कठायतका अनुसार सुरुका दिनहरूमा पुलिस आफैँ अन्य अस्पतालमा गएर उपचार गर्नु पर्ने अबस्थामा थियो । तर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियम अनुरुप सबै खालका नागरिकले पुलिस अस्पतालमा कोभिडको उपचार पाइरहेका छन् ।
कोभिडमा अब्बल सशस्त्र
सुरक्षा निकायका तीन अङ्ग मध्य सशस्त्र प्रहरीले भने कोभिड महामारीमा आफुलाई अब्बल साबित गरेको देखिन्छ । कोभिड महामारीको शुरुआती अबस्थादेखिनै काठमाडौंको बलम्वुमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालले भने कोभिड महामारीमा परेका नागरिकको चहर्याई रहेको घाउमा मलम लगाई रहेको छ।
२० आइसीइू र एक सय ८० आइसोलेसन बेड रहेको उक्त अस्पतालले हालसम्म एक हजार छ सय भन्दा बढि कोरोना संक्रमणमा परेका नागरिकको उपचार गरिसकेको छ भने सयौं नागरिकहरु उपचाररत छन्। सशस्त्र अस्पतालमा हालसम्म २० जना भन्दा बढि कोरोना संक्रमितहरु प्लाज्मा थेरापीबाट निको भएका छन्। सशस्त्र अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको निको सङ्ख्या पनि धेरै छ। राम्रो उपचार भई निको हुनेको सङ्ख्या धेरै भएकाले संक्रमणमा परेका नागरिकको पहिलो रोजाईको अस्पताल नै सशस्त्रको अस्पताल रहेको छ।
क्याटेगोरी : बिचार, समाचार, स्वास्थ्य
ट्याग : #apf, #breaking, #Corona, #nepal army, #nepal police
कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनेमा बहराइन दोस्रो देश
कोरोनाको खोप प्रयोग गर्न दिनेमा बहरानइन दोश्रो
कारोना विरुद्धको खोप ल्याउने यस्तो छ तयारी